ဇန္နဝါရီလ 2020 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဇန္နဝါရီလ 2020
နေအိမ် > ဇန္နဝါရီလ 2020
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ပဲရစ်အကြောင်းကိုကိုချစ်ဖို့ဤမျှလောက်ရှိပါတယ်. သင်သည်အဘယ်မှာပင်စတင်ကြဘူး, မှန်သော? စိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာ Eiffel မျှော်စင်နှင့် Louvre တူသောအကြီးဆိုဒ်များဖြစ်ပါသည်. သို့သော်အဘယ်ကြောင့်လည်းတမြို့လုံး၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောကျောက်မျက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ်? Let us start with…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သာရွေးချယ်ဖို့ခဲယဉ်းသည်5လွယ်ကူသောနေ့သင်နှင့်အတူရှယ်ယာမှမီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips. အီတလီဖက်ရှင်မြို့တော်အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ resplendent ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်နှင့်ပြည့်စုံသည်သာမက, သို့သော်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သမိုင်းရှိပါတယ်, ဗိသုကာနှင့်လှပသော…